Ahịa Ahịa Na-agbanwe Agbanwe? | Martech Zone
Ahịa Ahịa Na-agbanwe Agbanwe?
Ihe omuma ihe a na-achota otutu ihe di iche site na a Ihe ngosi CMO nke 2014, ma m na-atụ ụjọ na ọ ga-eji aha dị egwu meghee ya. O kwuru, sị:
78% nke ndị zaghachiri kwenyere na a na-atụ anya na ahịa ga-agbanwe mgbanwe mgbanwe na afọ 5 sochirinụ.
Nkwanye ùgwù, ekwetaghị m. Marketing na-agbanwe ma dijitalụ na-ebute ụzọ nke ọtụtụ atụmatụ. Ntinye ego na-agbanwe, usoro mmekọrịta mmadụ na ọdịnaya abanyela nke ọma, ngwaọrụ ndị ahụ na-adịwanye oke ọnụ ma dịkwa ọnụ ala maka azụmaahịa nwere obere mmefu ego. Ma ahia - nnweta, njigide na upsell dị oke egwu dị ka ọ dịbu.
Ọ ga-akara m mma ma infographic ahụ kwekọọ na nkwupụta nkwuwa okwu nke Accenture:
CMOs: Oge maka mgbanwe dijitalụ ma ọ bụ ihe ize ndụ ịhapụ n'akụkụ
Ahịa agbanweela… mana ọtụtụ ndị na - ere ahịa, ụlọ ọrụ azụmaahịa, na atụmatụ azụmaahịa agbanwebeghị na oge. N'ezie, nke ahụ dị mma maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụụ bụ ndị na-enyere ndị isi ndị a aka wetara atụmatụ ha n'ihu. Ma ọ bụghị na-enweghị ihe mgbu. Ndị na-ajụ akwụkwọ ọdịnala na-aga n'ihu ịnwa inye iwu maka mmefu ego niile ebe mgbasa ozi ọhụụ agbakwunyere ma na-eto.
Ihe nwere inye, n'oge na-adịghị anya, ekwenyere m na nkwụsị ahụ ga-abụ na ndị na-ajụ ọdịnala dịka mbipụta na mgbasa ozi. Y’oburu na ibu onye ahia ka ogha n’iru, inwere ike igbasa usoro gi ma nweta enyemaka nke g’eme ka ntughari gaa na mgbasa ozi dijital.
Tags: 2014accenturer cmo ọmụmụọmụmụ cmonyocha cmoinfographic
Tinye Apụta Image Post Tọmbneelụ gị WordPress RSS nri